Ungazicima njani zonke iiNgcaciso zeWordPress | Martech Zone
Njengoko iincoko ezijikeleze amanqaku ziye zaya kumaqonga eendaba ezentlalo, iinkqubo zokubeka izimvo kwiinkqubo zolawulo lomxholo njengeWordPress ziye zadluliselwa koovimba abagcina imiyalezo engafunekiyo. Lilishwa ngokwenene, bendihlala ndithanda ukuzibandakanya nabafundi bam kwindawo yam kwaye ndibaphendula.
Emveni kweminyaka, Ukuqhagamshela ngasemva ziye zanda njengoko abacebisi be-SEO bezama ukwenza njalo umdlalo iinjini zokukhangela. Ewe, uGoogle ubanjiwe kwaye waphucula ii-algorithms zazo kancinci. Benza umsebenzi omangalisayo wokuba i-backlinks embi ingancedi indawo yakho kuphela, baya kukungcwaba kwiziphumo zokukhangela.
Ayimisi i-blackhatters, nangona kunjalo. Isicwangciso esinye esicaphukisayo abasithumele kwiminyaka edlulileyo izimvo spamming. Kwinkqubo yolawulo lomxholo njengeWordPress, izimvo zivulekile ngokwendalo. Aba bantu bakha iinjini ezirhubuluza kwimimandla, fumana ifom yezimvo, kwaye uthumele amagqabantshintshi ngonxibelelwano ubuyela kwindawo yabo kumzamo wokukhangela iinjini.
Kuyacaphukisa njengomnini wesiza. I-WordPress inesixhobo esihle, Akismet, inceda ngokusebenzisa uthungelwano lwe-spammers ezichaziweyo kunye nokusebenzisa ezo ngxelo kumagqabaza akho. Nangona kunjalo, ukuba awunayo iseti kwaye indawo yakho ifunyenwe zezi bots, uya kuzifumana unamawaka amagqabaza ogaxekile… ngamanye amaxesha ubusuku. Njengoko bendijonga iisayithi ezindala ngokuhlwanje kwaye ndizifumana zihlaziyiwe, ndiyifumene kanye loo nto. Omnye wabo wayenamazwana angaphezulu kwama-9,000 ogaxekile!
Ukuzama ukucima amawaka eempendulo zogaxekile kwiphepha elikwipaneli yolawulo lweWordPress kuyaphazamisa, ke- ngombulelo- umntu owakhe Plugin WordPress lelo liqhinga.
Ungazicima njani zonke iiNkcazo okanye onke amaNqaku aseleyo
Khangela kwaye ufake ifayile Cima Zonke iiNkcazo ngokulula Faka iplagi. Nje ukuba wenze iplagi, ukhetho lwemenyu luya kongezwa kwimenyu yezixhobo zakho.
Izixhobo> Cima onke amaNqaku ngokulula
Ndihlala ndicebisa ukuba wenze isiseko sedatha yakho yeWordPress ngaphambi kokwenza isixhobo esinjengalesi ... akukho ndlela yokufumana la magqabantshintshi ukuba ngempazamo uzisule zonke!
Nazi iindlela onokukhetha kuzo kwiplagi:
Cima onke amaNqaku aseleyo -Indlela elungileyo yokugcina amagqabantshintshi akho ngelixa ususa ezinye.
Cima onke amaNqaku - oku kusula onke amagqabantshintshi kwinkqubo yakho.
Ndingacebisa ukuba usebenzise le iplagiji ukuzama ukungcakaza kunye nedatha yakho ngqo! Kwaye, nje ukuba ugqibile, ndingacebisa ukukhubaza iplagi ukuze abathengi bakho okanye abanye abalawuli bangayisebenzisi ngengozi.
tags: spam engasemvaspam emnyamacima zonke izimvocima zonke izimvo ngokululaizimvo ezilindileIzimvo zamagama
Ngubani oza kuyakha iwebhusayithi yakho elandelayo?